I-TidyMarketer: I-All-In-One ye-SaaS yeNtengiso yezeNtengiso zaMaphulo | Martech Zone
I-TidyMarketer: I-All-In-One ye-SaaS yeNtengiso yezeNtengiso
Inkcitho yemithombo yeendaba kwihlabathi iyanda ngereyithi ye-5.1%, ekulindeleke ukuba ifikelele I-2.1 trillion kwi-2019, ngokuka McKinsey. Inkcitho yedijithali ichithe ukulungele Ukufumana inkcitho yeTV kwi 2018. TidyMarketer Usungule isisombululo somkhankaso wentengiso kunye nomakhi wesicwangciso seendaba, ikhalenda yomkhankaso, iingxelo ezizenzekelayo nokunye okuninzi, ekusebenzisaneni namaqela entengiso neearhente.
Iqonga le-SaaS livumela abathengisi ukuba bacwangcise, balungelelanise, basebenzisane, kunye nokulinganisa lonke ulawulo lwephulo kwiqonga elinye. Yenzelwe ukunceda abathengisi baqhube amaphulo aphumeleleyo kwintengiso ye-imeyile ukuya kumajelo asekuhlaleni, ukubonisa intengiso, i-PR, iminyhadala nokunye okuninzi.
I-TidyMarketer's Umakhi weSicwangciso seMedia esizenzekelayo, elayishwe ibenchmark ze-KPI kunye neefomula, ivumela abasebenzisi ukuba benze kwaye bahlengahlengise izicwangciso zomkhankaso, besebenzisa ulwabiwo-mali kunye nokusebenza kwephulo elaziwayo ukuqikelela iziphumo zomkhankaso. Oku kunokuba yintengiso kwi-Intanethi, ukufakwa kweapps yeselfowuni, izikhokelo okanye nangaphezulu.
Iimpawu zeTidyMarketer zibandakanya
IziCwangciso zokuThengisa -Ivumela amaqela ukuba akhe izicwangciso zentengiso ezibanzi, ezizaliswe ngokubonakalayo okucacileyo, kubandakanya neziphumo eziqikelelweyo kunye notyalo mali, ukulungele ukwabelana namaqela angaphakathi okanye abathengi bangaphandle. Izixhobo ezizenzekelayo zisusa isidingo sengxelo zemanyuwali, kwaye oku kunceda iinkampani ukuba ziwulungelelanise umsebenzi wazo, zinciphise umngcipheko weempazamo zabantu kwaye ekugqibeleni zilinganise ukusebenza.
Ikhalenda Yomkhankaso -Tsala kwaye ulahle amanqaku kunye nezaziso ezikhawulezileyo, kuthetha ukuba amaqela anokulungelelanisa imikhankaso emininzi kwindawo enye.
Umlawuli womsebenzi -Yenza ukuba abasebenzisi babele imisebenzi kumalungu kunye nokulawula iikontraki zangaphandle kunye neearhente.
I $ 25 / ngenyanga, itekhnoloji yentlalo enika amandla iqonga le-SaaS ivumela abathengisi ukuba bacwangcise, baququzelele kwaye balawule imikhankaso, kuyo yonke indawo enye, ekulula ukuyisebenzisa. Yenzelwe ukunceda abathengisi baqhube amaphulo aphumeleleyo kwintengiso ye-imeyile ukuya kumajelo asekuhlaleni, ukubonisa intengiso, i-PR, iminyhadala nokunye okuninzi. I-TidyMarketer ikwabonelela ngesisombululo se-arhente.
Ukubhengezwa: Sisebenzisa ikhonkco lokudibana leTidyMarketer kweli nqaku
tags: ikhalenda yephuloucwangciso lwephuloUmphathi womsebenzi wephuloInkcitho kwintengiso yedijithalibonisa intengisoemail Marketingiziganekoisicwangciso sokuthengisaprImidiya yokuncokolaeceko
Ngaba indlu yakho yokuthengisa yakhiwe elityeni okanye esantini?
Ukuthengiswa kweNkonzo yokuZenzela okanye amaXabiso asekwe kwiXabiso- Kusengamava